Ny Fivoaran’ny #Instameet ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2017 11:32 GMT
Ny tanjaky ny olompirenena: Afisy ho an'ny famoriambahoaka hoavy karakarain'ny antoko Janatha Vimukthi Peramuṇa eo ivelan'ny tsena fahiny ao Negombo, ao amin'ny Sea Street. Sary an'i @amaliniii. Nalaina nandritry ny Instameet natao tao Negombo tamin'ìty taona ity.
Ity lahatsoratr'i Raisa Wickrematunge ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Groundviews, tranonkala fanaovana gazetin'olontsotra efa nahazo loka tao Sri Lanka. Navoaka etsy ambany ny dika avy aminy, ho ampahany amin'ny fifanekena hifampizara votoaty miaraka amin'ny Global Voices.
Ny 26 Martsa 2017, tarika iray ahitàna olona 13 na mahery no niteraka fisafotofotoana teny anivon'ireo mpivarotra ao amin'ny tsena fahiny ao amin'ny Sea Street, ao Negombo any amin'ny morontsiraka andrefan'i Sri Lanka.
“Avy aiza ianareo?” no fanontaiana tsy nitsahatra niverimberina. Miaraka amin'ny fakantsariny sy ny finday avo lenta, angamba toy ny hoe mpizahatany no fahitàna ilay tarika.
Raha ny marina, nandray anjara tamin'ny Instameet Sri Lanka ilay vondron'olona – ampahany amin'ny hetsika erantany izay nifandraisan'ireo mpampiasa Instagram ao aminà firenena iray na toerana iray voafaritra. Amin'ny ankapobeny dia Instameets roa isantaona no misy ary manerana izao tontolo izao, mikarakara ny fihaonan'izy ireo manokana ireo mpampiasa Instagram amin'izay andro izay.
Kanefa na toy ny mpizahatany aza no fahitàna ilay vondrona, manana zavatra iraisany ireo mpandray anjara tamin'ny Instameet – ny faniriana, tsy ny hihaona fotsiny amin'ireo olona izay fantany amin'ny alàlan'ny fitetezana zava-boasoratra, fa koa mba hitrandraka sy handrakitra toerana iray voafidy – Negombo.
“Izaho manokana mihevitra fa toerana goavana [azo anaovana Instameet] i Negombo satria tena feno fahasamihafàna ao. Ny taotrano sy ny tontolo dia vavolombelon'ny tantara sy ny kolontsainy manankarena.” – mpandray anjara ary mponina ao Negombo, Aadil Marzook (@aadil.marzook)
Ny sasany amin'ireo resaka an-jorony nataon'i Aadil Marzook nandritry ny fitetezana dia nampivoitra betsaka ny momba ny kolontsaina sy tantaran'i Negombo izay mety tsy ho hitanao any anaty boky torolàlana, ary matetika no mandalo fotsiny tsy voatahirin'ny fakantsarin'ireo mpizahatany.
Ny hitan'ny sasany tamin'ireo mpandray anjara tamin'ity taona ity :
(soratra etsy amin'ny sary: Misaotra anao ry @amaliniii ❤ Hafaliana hatrany ny manangana fahatsiarovana miaraka amin'ity vondrona ity 😊)
Ny rindrina manoloana eo amin'ny Kolejy St. Mary, ohatra, dia rakotry ny soratra hoe ‘Tsy mila hety volo.’ Raha ny marina dia valifaty avy amin'ireo mpianatra io, hoy i Aadil nanazava.
“Avy aminà fianakaviana mpanjono ny betsaka amin'ireo mpianatra mianatra ao amin'io sekoly io. Toherin-dry zareo ireo fepetra henjana momba ny fanamiana. Tsy avelan'ny sekoly ho atao ny volo misahondrahondra na pataloha tery loatra – indraindray, ho toy ny sazy, dia hetezan-dy zareo ny volon'ny mpianatra,” hoy i Aadil nanazava.
Ny potipoti-baovao tahaka io no mahatonga ny Instameet ho toka-miavaka. Tsy ny fakàna sary ireo endrika mampiavaka ny tanàna fotsiny no ifantohan'ireo mpandray anjara, na ny masoandro milentika, fa koa ireo ampahana kolontsain'ilay faritra ary ny fiainana andavanandron'ny mponina.
Efa ela ireny fifanakalozan.dresaka ireny no ampahany tamin'ny Toko sy andinin'ny Instameet tao Sri Lanka, izay nanomboka ny 2013 tamin'ny nanaborahan'i Abdul Halik Azeez (@colombedouin) ny hevitra mahatsikaiky tamin'ireo olona nanatrika, hetsika iray hafa niresahana manodidina ny sehatra media sosialy – TweetUp, ho an'ireo mpampiasa Twitter.
@gopiharan @nazly @Hayahz @Ayshmarq @ApsaraGamage miketrika ny hevitra hikarakaràna #instameet iray ao #lka liana ve ianareo ry zalahy?
“Efa fomba fanaon'ny ao Sri Lanka ny fihaonana mivantan'ireo vondrom-piarahamonina avy aty anaty serasera… toy ny hetsika fisokafan'ny fandraisam-pitenenana ho an'ireo mpampiasa ny sehatra fampiantranoana bilaogy Kottu,” hoy i Halik. “Nahita olona nampiantrano fihaonan'ny lafivalon'izao tontolo izao tao amin'ny Instagram aho, ary noheveriko fa mety hahaliana ny hanao iray tahaka io koa, araka izany dia nanontany olona aho raha toa mety ho liana izy ireo.” Eny no valiny.
Saripika avy amin'ny Instameet voalohany tao amin'ny Mardana Railway Station ao Colombo tamin'ny 2013
Maneho hevitra i Nazly Ahmed (@nazlyahamed), iray amin'ireo mpikarakara ny Instameet tamin'ity taona ity hoe “tsy natao ho raharaham-barotra ny Instameet. Matetika ireo marika fantadaza no miezaka ny mijirika hetsika iray, saingy eto izahay dia miezaka ny mitazona azy io ho tsotra – resaka fampifandraisana vondrom-piarahamonina sy fitrandrahana zavatra vaovao no resaka. Afaka miaraka manandrana zavatra betsaka ianareo amin'ny maha-vondrona iray fa tsy toy ny hoe misy idiran'ny marika iray,” hoy i Nazly nanampy.
Hatramin'io fihaonana voalohany io, nisy ny fiovàna, tsy hoe fotsiny amin'ny lafiny fandraisana anjara fa koa amin'ny fomba nampiasàna ny Instagram mihitsy.
Fiovàna iray hafa ny fikisahana avy amin'ny fampiasàna ny finday avo lenta ho any amin'ny fakantsary mba hakàna saripika. Ny vokany dia vitsy ny saripika tafakatra teo noho eo tamin'ny fampiasàna ny tenifototra ho an'ity taona ity. “Heveriko fa rehefa eny am-pandehanana eny ny olona, lasa manahirana ny miato sy mampakatra saripika. Sady koa, miankina amin'izay mampahazo aina kokoa ny mpampiasa tsirairay ilay izy. Ho ahy manokana, nezahako ny handrakitra fihetsehampo. Tiako ny mandeha manakaiky izay alaiko sary – ary manampy ahy handrakitra izany ny DSLR,” hoy i Nazly nanazava.
Nolazain'i Hashinika Abeygunasekara (@hashiabey) fa raha ny marina dia taorian'ny nanatrehany fikarakarana Instameet iray, natao tao Kompannaveedya, no niteraka aingam-panahy tao aminy hividy fakantsary iray sy tena hanohy tamin'ny fomba matotra kokoa ny resaka fakàna sary.
Sary avy amin'ny Instameet tao Kompannaveedya any amin'ny Slave Island tamin'ny 2015
“Hitako fa ny fampiasàna fakantsary dia manome zoro sy fomba fijery tsara kokoa. Amin'ny fifantohana amin-javatra iray koa, dia azonao atao ny manao zavatra betsaka kokoa. Indraindray aho mahita olona mahatsapa somary mandositra na matahotra rehefa mampiasa ny findaiko aho hakàna sary. Fa ankehitriny rehefa mandeha mihodinkodina ao Pettah aho, ohatra, hitako faly ny olona mahita ahy maka sary azy ireo rehefa hitan'izy ireo ny fakantsariko.”
Araho ny #WWIMI14SriLanka hijerena ireo sary mahafinaritr'iretsy olona etsy ambony iretsy nanerana an'i Colombo. Manantena izahay
Na nisy aza ny fiovàna teo amin'ny fampiasàn'ny olona ny Instagram, endrika iray no tsy niova – ary io dia ny fanirian'ireo mpandray anjara handrakitra an-tsary ny tena votoatin'ireo toerana tsidihan-dry zareo. Ankoatra lavitry ny fifandraisan'ireo samy mpampiasa Instagram, nifandray tamin'ny tontolo iainany ihany koa ireo mpandray anjara, sy tamin'ireo olona nifanena tamin'izy ireo teny an-dalana teny.
Hoy i Amalini de Sayrah (@amaliniii) iray amin'ny mpikarakara ny Instameet tamin'ity taona ity:
Natao mba hanehoan'ny olona ny fahaizany mamorona ny Instagram. Ny hakanton'ilay sehatra, ary ny Instameet fotsiny amin'izao, dia efa varavarankely iray misokatra aminà fomba fijery marobe isankarazany. Fony vao niresaka voalohany momba ity Instameet ity izahay, betsaka ny olona nanontany anay raha toa izy ity ka natao fotsiny ho an'ireo efa matianina amin'ny fakàna sary – na ireo fihaonana na ilay fampiasa fotsiny dia samy natao ho an'ny tsirairay, ary ny ankamaroan'ireo izay mampiasa ilay fampiasa dia olona tsotra izay mankafy ny resaka sary, nampianatra ny tenany sy liana mikaroka zavatra vaovao. Ny Instagram dia manome toerana irayho an'ny olona hilazàny ny tantarany, tsy miankina amin'izay fitaovana ampiasainao, na takatrao vidiana mba ho ampiasaina.
Sary avy amin'ny Instameet tao Negombo tamin'ity taona ity
Tany akaikin'ny farihin'i Negombo no nanaovana ny fotoam-panokafana ny Instameet tamin'ity taona ity. Notsidihan'ireo mpandray anjara ny tsena tranainy tao Sea Street, ny fiangonana St. Mary ary ny tsena fivarotana trondro , talohan'ny niverenana nanaraka ny moron'ny lakandrano, niafara tamin'ny morontsiraka hiandrasana ny fodian'ny masoandro.
Ny ambin'ireo saripika avy amin'ny Instameet tamin'ity taona ity dia afaka jerena amin'ny alàlan'ny tenifototra #wwim15srilanka.
20 ora izayNepal